मुस्किलले पानी पर्थ्यो मनाङमा, अहिले त बाढी नै उर्लियो… « AayoMail
मुस्किलले पानी पर्थ्यो मनाङमा, अहिले त बाढी नै उर्लियो…
वर्खा लागिसकेको थिएन। जेठ १४ गते मनाङको सदरमुकाम चामेमा बाढी पस्यो। त्यहाँका खोला-खहरेहरू त्यसरी उर्लिएको चामेवासीलाई यसअघि थाहा थिएन।
यो आफैंमा एउटा अचम्मको दृश्य थियो। जीवनमा पहिलोचोटी त्यसरी धमिलो लेदो पानी घरआँगनमा बगेको सायद उनीहरूले पहिलोचोटी देखिरहेका थिए।
एउटा अनौठो त के भइदियो भने निकै कम पानी पर्ने मनाङमा पहिलोपटक चारद िनदेखि लगातार झरी लागिरहेको छ।
हिमालपारिको जिल्ला भनेर चिनिने मनाङमा एकदमै कम पानी पर्छ। करिब ८,१६३ मिटरको उचाइमा अवस्थित मनाङसँगै जोडिएको अर्को जिल्ला हो मुस्ताङ। जो करिब ८,१६७ उचाइमा छ। मुस्ताङ त नेपालको ‘मरुभूमि’ भनेर पनि चिनिन्छ।
मनाङमा पानी नै नपर्ने भएका कारण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले त्यहाँ वर्षामापन केन्द्र नै राखेको छैन। विमानस्थलमा रहेको सामान्य यन्त्रबाट कहिलेकाहीँ मात्रै त्यहाँको वर्षाबारे जानकारी हुन्छ।
पानी नै नपर्ने ठाउँमा बाढीको के कल्पना?
‘यस्तो त मैले आजसम्म देखेको थिएन। कता कता पहिरो खस्यो भन्ने सुनेकोचाहिँ हो’ चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घले भन्छन् ‘अहिले त हेर्नुस् त न झरी थामिएको छ न खोला नाला सुस्ताएका छन्।’
६ दशक पार गरिसकेका पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरूङ पनि मनाङकै हुन्।
‘जीवनको यतिका वर्ष भयो मैले यस्तो थाहा पाएको थिइनँ। मनाङमा त हिँउ पर्ने तर पानी धेरै नपर्ने ठाउँ हो।’
‘सायद यो वर्षाको प्याटर्न चेन्ज भएको हो कि!’ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेल भन्छिन् ‘यसअघि त्यहाँ त्यसरी पानी परेको थाहा थिएन। त्यहाँ केन्द्र नभएपछि हामीले पोखराबाटै त्यसको सामान्य जानकारी लिने गरेका थियौं।’
चामेलगायतका वस्तीमा बाढी पस्नुअघिसम्म त्यहाँ करिब ५४ मिलिलिटरभन्दा धेरै(चौविस घण्टामा) पानी परेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको थियो।
त्यसमा मौसम विभागले कालीगण्डकी क्षेत्रका आधरमा मापन गर्दै आएको छ। यद्यपि गण्डकीका केही क्षेत्रमा मनसुनको प्रभाव पर्ने भनेर विभागले सचेत गराउँदै आएका थियो।
तर मनाङमै त्यसरी पानी पर्ला र गाउँवस्ती नै डुबाउने खालको बाढी आउला भन्ने कल्पना सायदै थियो।
‘यसअघि खासै पानी नपर्ने भएका कारण त्यहाँ वर्षा मापनका लागि कुनै यन्त्र राखेका थिएनाैं’ मौसमविद निराकर थापाले भने ‘अहिले त पानीमात्रै होइन त्यहाँ त बाढी नै आइदियो। खासगरी बाढीको फोकस त तराईतिरमात्रै गरिएको थियो।’
उनका अनुसार अब त्यो एउटा गहिरो अध्ययनको विषय बनेको छ।
‘माथितिर हिमतालहरू फुटेको वा धेरै हिँउ पग्लिएको भन्ने पनि छैन’ उनले भने ‘अब त्यो हाम्रा लागि अध्ययनकै विषय भएको छ। यसमा धेरै फ्याक्टरहरूले काम गरेका हुनसक्छन्।’
तर अहिले नेपालमात्रै होइन वर्षाको प्रवृत्ति दक्षिण एशियामै फरक देखिएको छ। अझ भन्दा विश्वभरि नै यस्तै छ।
पानी नै नपर्ने ठाउँमा ‘अतिवृष्टि’ भएको छ। पानी परेर सधैं सास्ती हुने ठाउँमा ‘अल्पवृष्टि’ छ। सिन्धुपाल्चोक जोखिममै रहे पनि मनाङ त्यसको अपवाद बनेको छ।
‘यो कुनै लोकल प्याटर्नमात्रै होइन। विश्वभरि नै यस्तै छ। खासगरी दक्षिण एशिया क्षेत्रमा यस्तै देखिएको छ’ मौसमविज्ञ प्रध्यापक मणिरत्न शाक्य भन्छन् ‘ग्लोबल वार्मिङ, जलवायु परिवर्तन वा यी ग्लोबल ‘फेनोमेनोन’ (जलवायु प्रणालीमा आकष्मिक आइपर्ने घटना) हुनसक्छन्।’
उनका अनुसार भारत र नेपालको मनसुन हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको स्थितिमा निर्भर छ।
विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् अहिले प्रशान्त महासागरको तापक्रम औसतभन्दा निकै कम भएको छ। यस्तो स्थितिलाई ‘लानिनो’ भनिन्छ र त्यसको सिधा असर वर्षामा पर्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै वर्षा हुने र बाढीपहिराको जोखिम बढ्ने हुन्छ। त्यसको ठीक उल्टो समुद्र तातेको अवस्थाललाई ‘अलनिनो’ भनिन्छ।
‘यसले साउथ एशियामा मनसुनी बायुको प्रभाव बढी पार्छ। मनसुन आउनुपूर्व भारत हुँदै आएका ‘ताउ–ते’ र ‘यास’ आँधी त्यही परिणामका रुप हुन्’ उनी भन्छन् ‘मनाङको वर्षा पनि लोकल इभेन्ट होइन। यो विश्वव्यापी रुपमा परेको प्रभाव हो।’
साता दिनमै एकैप्रकारका सामुद्रिक आँधी आउने संयोग लगभग विरलै हुन्छ। त्यो बेला नेपालमा पनि वर्षा भएको थियो। केही ठाउँमा आँधीहुरी पनि चलेको थियो।
‘यो सबै हाम्रो वशको कुरा हुँदैन। हाम्रा अनुमानमात्रै पनि काफी हुँदैनन्’ शाक्य भन्छन् ‘प्रशान्त महासागर र हिन्द महासागरको दूरी निकै टाढा भएपनि त्यहाँ भएका हलचलले समग्र दक्षिण एशियाकै मनसुन वा वर्षा र समग्रमा जलवायुको स्थिति निर्धारण हुन्छ।’
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष औषतभन्दा धेरै नै पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिसकेको छ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षदेखि ‘प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान प्रणाली’ सुरु गरेको छ । उसका अनुसार यो वर्ष बाढी पहिरोबाट करिब १८ लाख मानिस प्रभावित हुनेछन्।
मनसुनको प्रभाव सबैतिर औसतभन्दा धेरै नै पर्ने पूर्वानुमान गरिए पनि हिमाली क्षेत्रमा पनि वर्षाको यो स्थित आंकलन गरिएको थिएन।
मनाङको अवस्था के छ?
‘अहिले मानिसहरू घर छोडेर भागाभाग भएको छ’ चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष घले भन्छन् ‘कोही भीरपाखामा छन्। कोही ढुङ्गाको ओढारमा ओत लागेर बसेका छन्।’
उनका अनुसार त्यहाँ अहिले मोबाइल अनि अरु पनि कुनै सञ्चारका माध्यमले राम्रोसँग काम गरिरहेका छैनन्। विद्युत पनि अवरुद्ध भएको छ।
‘यहाँको सरकारी अस्पतालमा जेनेरेटर छ, आवश्यक पर्ने मोबाइलहरू यहीँ चार्ज गरिएको छ’ उनले भने ‘यसको पनि तेल सकिन लागेको यो बन्द भयो भने सबै सक्कियो।’
चामे तथा तालगाउँ सबैभन्दा धेरै प्रभावित छन्। चामेका करिब २५० घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। बाहिर जिल्लाबाट त्यहाँ काम गर्न गएका अरु ३ सयजति मजदुर पनि अलपत्र परेका छन्।
तालगाउँका करिब ७० घरपरिवारका करिब ३ भन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएका छन्। मर्स्याङ्दी नदीको किनारामा अवस्थित ताल गाउँ त्यहाँको नाशोङ गाउँपालिका १ नम्बर वडामा छ।
विस्थापित मानिसले खाने कुरा तथा लत्ताकपडासमेत घरमै छोडेका छन्। शरीरमा बचेको लुगा पनि भिजेका छन्।
धेरै माथिमाथिबाट खहरेहरूको साथ पाएर बग्दै आएको मर्स्याङ्दी अहिले हेरिनसक्नु भएको छ।
उद्धार र राहतमा ढिलाइ
मनाङका कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरूङका अनुसार मौसममा भइरहेको खराबीका कारण उद्धार र राहतमा ढिलाइ भएको छ। उनका अनुसार बुधबार नै गृहमन्त्रालयले पनि उद्धारका लागि आदेश दिइसकेको थियो। सेनाको हेलिकोप्टर पनि तयारी अवस्थामा थियो। तर मौसम खराबीका कारण उड्न भने सकेको छैन।
पोखराबाट पनि गण्डकी सरकारले राहत तथा उद्धार टोली पठाउन तयारी अवस्थामा राखेको छ। तर मौसममा सुधार नभएपछि जान सकेको छैन।
‘त्यहाँ फोन पनि एकदमै सीमित छ। भएको पनि सम्पर्क भइरहेको छैन’ उनले भने ‘म पनि त्यसैका लागि जुटिरहेको छु। प्रदेश तथा केन्द्र सरकार सबैबाट तयारी भइरहेको छ तर मौसममा सुधार आएको छैन।’
उनका अनुसार मौसममा सुधार आउनासाथ मनाङका लागि राहत र उद्धार टोली लिएर हेलिकोप्टर उड्नेछ।
‘खासगरी त्यहाँबाट विस्थापित भएकाहरूलाई अहिले तत्काल खाने कुरा र लगाउने कपडाहरूको खाँचो छ भन्ने बुझेको छु’ मनाङमा फोन सम्पर्क गरेको आधारमा उनले भने ‘बस्ने ठाउँको व्यवस्थापनका लागि पनि पहल भइरहेको छ। मैले सिडिओसँग कुरा गरिरहेको छु।’
चामे गाउँपालिकाका अध्यक्ष घलेका अनुसार विस्थापितको विचल्ली भएको छ। सडकहरू बिच्छेद भएका छन्।
‘कोही भीरपाखा कता कता छन् भन्ने सुनेको छु। झरी लागिरेहका कारण सबैतिर पुग्न पनि सकिएको छैन’ उनले भने ‘यहाँ हामी पर्खिरहेका छौं। काठमाडौं र पोखरामा पनि तयारी अवस्थामा छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसैमाथि फेरि मौसम पनि बिग्रिएको छ।’
उनका अनुसार स्थानी खोला खहरेमा बाढी बढिरहेका कारण अझै पनि जोखिम उत्तिकै छ।